कोलकाताको प्ले-अफ सम्भावना कति ? सबै टिमको प्ले-अफ समीकरण यस्तो छ – WicketNepal
WicketNepal Staff, २०७७ कार्तिक १४, शुक्रबार ०९:४१
कोलकाता नाइट राइडर्सले बिहिबार चेन्नाई सुपर किंग्ससंग लिगको ४९ औं खेलमा ६ विकेटको हार बेहोर्यो। अन्तिम बलको हारपछि १३ खेल खेलेको कोलकाता अब १ खेल मात्र खेल्न बाँकी रहेको अवस्थामा अंकतालिकामा ६ जित र ७ हार बेहोर्दै १२ अंक सहित पाँचौ स्थानमा यथावत रहेको छ। लिगमा हालसम्म २ टिमको प्ले-अफ पुग्ने नपुग्ने टुंगो लागेको छ। मुम्बई प्ले-अफ प्रवेश गरिसकेको छ भने चेन्नाई रेसबाट बाहिर भैसकेको छ।
लिगमा बाँकी खेलहरु : पन्जाब Vs राजस्थान , दिल्ली Vs मुम्बई, बैंगलोर Vs हैदरावाद , चेन्नाई Vs पन्जाब, कोलकाता Vs राजस्थान, दिल्ली Vs बैंगलोर, हैदरावाद Vs मुम्बई
कोलकाताको प्लेअफ सम्भावना कति ?
अब कोलकाताले आगामी खेल आइतबार राजस्थान रोयल्स बिरुद्ध खेल्नेछ जसमा जित हात पारेको खण्डमा कोलकाताले अधिकतम १४ अंक बटुल्नेछ। राजस्थानसंग आगामी खेलमा हारेको खण्डमा कोलकाता बाहिरिने निश्चित हुनेछ।
कोलकाता छनौट हुनको लागि सबैभन्दा उत्कृस्ट समीकरण निम्न हुनेछ।
– कोलकाताले आइतबार राजस्थानलाई पराजित गर्ने, पन्जाबले राजस्थान र चेन्नाईसंग बाँकी दुवै खेल हार्ने, हैदरावादले मुम्बई र बैंगलोरसंग कम्तिमा बढीमा एउटा खेल जित्ने।
माथिको केसमा कोलकाताको १४ अंक हुनेछ भने राजस्थान र पन्जाबको १२ अंक हुनेछ भने हैदरावादको १२ अंक हुनेछ। यस्तो भएमा सहजै कोलकाता प्ले-अफ पुग्नेछ।
नेट रन रेट अघि आए कोलकातालाई मुस्किल
कोलकाताको लागि माथिको समीकरण सहज देखिएता पनि यदी सोचेको जस्तो नतिजा नआएको खण्डमा भने नेट रन रेट कमजोर रहेकोले कोलकाताको सम्भावना कमजोर छ। कोलकाताको नेट रन रेट -०.४६७ छ भने हैदरावादको +०.३९६, पन्जाबको -०.०४९ तथा दिल्लीको +०.०३० र बैंगलोरको +०.०४८ रहेको छ। राजस्थान ( -०.५०५ ) बाहेक सबै टिमको नेट रन रेट कोलकाताको भन्दा राम्रो छ। यो अवस्थामा अब कोलकाताले अर्को खेल जितेर प्लेअफ पुग्नको लागि नेट रन रेटको हिसाब भएको खण्डमा कोलकातालाई मुस्किल छ। पन्जाब, हैदरावाद अथवा दिल्ली र बैंगलोर मध्ये १ टिम पनि १४ अंकमा सिमित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ तर त्यो अवस्थामा नेट रन रेटमा कोलकाता पछि पर्ने निश्चित छ।
अन्य टिमको प्ले-अफ सम्भावना
सनराइजर्स हैदरावाद : २ खेल खेल्न बाँकी रहेको हैदरावादको अंक १० रहेको छ। अब उसले मुम्बई र बैंगलोरसंग शारजाह मैदानमा खेल्ने तालिका रहेको छ। अब हैदरावादले दुवै खेल जितेर १४ अंक बनाउनु पर्नेछ भने अहिले आफु भन्दा माथि रहेका टिमहरु मध्ये २ टिमको पनि बढीमा १४ अंक होस्। हैदरावादको नेट रन रेट +०.३९६ रहेको छ जुन मुम्बई पछिकै दोश्रो उत्कृस्ट हो त्यसैले नेट रन रेटमा अघि बढ्ने भरपुर सम्भावना बाँकी रहन्छ। तर त्यसको लागि बलियो मुम्बई र बैंगलोरलाई शारजाह मैदानमा परास्त गर्ने चुनौती पार गर्नुपर्नेछ। एउटा मात्र हारले हैदरावादको सम्भावना समाप्त हुनेछ।
राजस्थान रोयल्स : २ खेल खेल्न बाँकी रहेको राजस्थानको १० अंक रहेको छ। अब राजस्थानले पन्जाब र कोलकाता बिरुद्ध खेल्न बाँकी रहेको छ। यदी दुवै खेल राजस्थानले जितेको खण्डमा २ वा बढी टिमको पनि समान १४ अंक हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा नेट रन रेट अघि आएको खण्डमा राजस्थानको सम्भावना कमजोर छ। राजस्थानको नेट रन रेट सबैभन्दा कमजोर ( -०.५०५ ) रहेको छ। त्यसैले अबको बाँकी २ खेल राजस्थानले ठुलो अन्तरले जित्नु पर्नेछ जसले नेट रनरेटमा सुधार गर्नेछ। एउटा मात्र हारले राजस्थानको सबै ढोका बन्द हुनेछ।
किंग्स-११ पन्जाब : चेन्नाईसंग कोलकाताको हारले पन्जाबलाई बढी सहज बनाएको छ। १२ अंक सहित अंकतालिकामा चौथो स्थानमा रहेको पन्जाबले अब बाँकी दुवै खेल ( राजस्थान र चेन्नाई बिरुद्ध ) जितेको खण्डमा पन्जाब कुनै अवरोध बिना प्लेअफ पुग्नेछ। यदी पन्जाबले एउटा मात्र खेल जितेको खण्डमा पनि सम्भावना हुनेछ,तर नेट रन रेट ( -०.०४९ ) रहेको हुँदा अंक बराबरी भएको खण्डमा भने पन्जाबलाई जोखिम छ। किनकि विशेष गरि यदी हैदरावादले ( +०.३९६ ) पनि १४ अंक बटुल्ने हो भने पन्जाब नेट रन रेटमा पन्जाबलाई हराउन सक्छ। यदी दुवै खेल हारेको खण्डमा पन्जाबको सबै ढोका बन्द हुनेछ।
मुम्बई प्ले-अफ पुग्ने पहिलो टिम बनेको छ
दिल्ली क्यापिटल्स : लिगमा उत्कृस्ट सुरुवात पछि हैदरावाद र कोलकातासंगको लगातार २ ठुलो हार पछि दिल्ली डराउन थालेको छ। अब दिल्लीको बाँकी २ खेल मुम्बई र बैंगलोरसंग रहेको छ। यदी दिल्लीले दुवै खेल जित्ने हो भने प्ले-अफ र शिर्ष-२ स्थानमा समाप्त गर्नेछ। एउटा जितले पनि दिल्ली प्ले-अफ पुग्नेछ तर शिर्ष-२ स्थानको लागि भने मुम्बई, बैंगलोर र पन्जाबको नतिजा कस्तो हुनेछमा भर पर्नुपर्नेछ। दुवै खेलमा हार बेहोरेको खण्डमा पनि दिल्लीको सम्भावना रहन्छ जसको लागि अन्य टिमको नतिजामा भर पर्नुपर्नेछ जसको लागि नेट रन रेटमा भने हारले धेरै असर नपरेको हुनुपर्छ।
रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर : दिल्ली जस्तै बैंगलोर पनि चेन्नाई र मुम्बईसंगको लगातार २ हार पछि थोरै चिन्तित छ। नेट रन रेटमा बैंगलोर दिल्लीसंग अघि रहँदै समान १४ अंक रहेता पनि दोश्रो स्थानमा छ। अब बैंगलोरले बाँकी २ खेल हैदरावाद र दिल्लीसंग खेल्नेछ। दुवै खेल जितेको खण्डमा बैंगलोर प्ले-अफ पुग्दै शिर्ष-२ मा रहनसक्छ। यदी एउटा मात्रै खेल जितेको खण्डमा पनि बैंगलोर छनौट हुनेछ तर शिर्ष-२ स्थान भने अन्य टिमको नतिजामा भर पर्नुपर्छ। दुवै खेलमा हार बेहोरेको खण्डमा पनि बैंगलोरको जसको लागि अन्य टिमको नतिजामा भर पर्नुपर्नेछ जसको लागि नेट रन रेटमा भने हारले धेरै असर नपरेको हुनुपर्छ।
मुम्बईको शिर्ष-२ सम्भावना : मुम्बई आईपीएल २०२० को प्ले-अफ पुग्ने पहिलो टिम हो जसले अब दिल्ली र हैदरावादसंग २ खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। यदी बाँकी २ मध्ये एउटा खेल जितेमा पनि मुम्बई शिर्ष-२ मा पुग्न सक्छ। उत्कृस्ट नेट रन रेट ( १.१८६ ) रहेकोले दुवै खेलमा हार पछि पनि मुम्बईको शिर्ष-२ पुग्ने सम्भावना रहन्छ।
आईपीएलको लिग चरणको अंकतालिकामा शिर्ष-२ स्थानमा रहने टिमले ‘पहिलो क्वालीफायर’ खेल्न पाउछ जुन खेल जित्ने टिम सोझै फाइनल पुग्छ। पहिलो क्वालिफायरमा हार बेहोरेको खण्डमा उक्त टिमले तेश्रो र चौथो स्थानमा रहने टिम बीच खेलको विजेता टिमसंग दोश्रो क्वालिफायर खेल्न पाउछ जुन खेल जित्ने टिम फाइनल पुग्छ।